Nisokatra tao Bulgaria ny RIU Palace Sunny Beach taorian'ny olana azo antoka momba ny fiarovana tao amin'ny RIU Hotels in Caribbean
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nisokatra tao Bulgaria ny RIU Palace Sunny Beach taorian'ny olana azo antoka momba ny fiarovana tao amin'ny RIU Hotels in Caribbean
RIU Hotels & Resorts nanokatra ny Riu Palace Sunny Beach any Bulgaria a vaovao toeram-pialan-tsasatra ho an'ny olon-dehibe ihany amin'ny serivisy ho an'ny rehetra. Any amin'ny faritra Sunny Beach no misy azy, io no hotely fahatelo an'ny rojo eto amin'ity toerana amoron-dranomasina ity ary ny hotely fahafito an'ny RIU any Bulgaria.
Ny morontsiraka dia miorina eo amoron'ny Ranomasina Mainty ary manana faritra manokana eo amoron-dranomasina misy fidirana mivantana ho an'ny vahiny ihany. Eto, ny mpanjifa dia afaka mankafy ny fitaovana rehetra atolotry ny hotely RIU, miaraka amin'ny seza fandraisam-bahiny sy elo.
Manana ny hotely Efitra feno fitaovana 335 miaraka amin'ny fantsom-panafody, kettle, minibar ary fahitana tsara amin'ny ranomasina. Izy ireo dia voaravaka amin'ny fomba somary ambany, miavaka amin'ny aloky ny fasika, fotsy sy manga, izay manintona ny firavaka voajanahary amin'ny toeran'ny hotely.
Afaka mankafy sakafo isan-karazany ny vahiny. Misy ny trano fisakafoanana lehibe ahafahanao mankafy ny sakafo maraina fanaovana buffet, sakafo atoandro ary fiaraha-misakafo miaraka amin'ny toeram-pisakafoanana mivantana, trano steak ary trano fisakafoanana misy lohahevitra roa: Krystal, manolotra sakafo fusion, ary Sunrise, bara amoron-tsiraka ary fisakafoanana misy lovia mediteranianina nentim-paharazana. Ho fanampin'izany, ny vahiny dia afaka mankafy ny kafe sy ny gilasy, Cappuccino, ary ny fisotroana, Lounge 24, amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro.
Riu Sunny Palace Riu nanokatra ny varavarany tamin'ny 15 Jona ary hisokatra mandritra ny vanim-potoana fahavaratra manontolo. Toerana idyllic ho an'ny fitsaharana miala sasatra amoron-dranomasina io. Izy io dia misy spa izay misy dobo anaty trano, dobo famonoana rano, sauna sy efitrano fandroana, ary koa menu misy fanorana sy fitsaboana hatsaran-tarehy hisafidianana, ankoatry ny pisinina any ivelany, gym ary kianja tenisy roa ho an'ny vahiny. izay te hijanona amin'ny endrika milamina mandritra ny fialantsasatra. Ity faritra ity dia misy faritra zaridaina sy hetsika mahafinaritra toa ny programa fanatanjahan-tena Riufit ary hetsika isan-karazany mandritra ny andro sy alina nomanin'ny ekipa fialam-boly ataonay, izay natao mba hananan'ny mpitsidika fahafinaretana tanteraka ity toerana itodiana ity sy ireo fotodrafitrasa omen'ny RIU complex ho azy ireo. .
Ity toerana tena tsara ity any amin'ny faritra Sunny Beach, izay iray amin'ireo tanjona mahaliana indrindra amin'ny morontsirak'i Bulgaria, ataon'ny iray amin'ireo morontsiraka mahafinaritra indrindra ao amin'ny faritra, midika izany fa afaka mankafy fivarotana maro isan-karazany mivarotra vokatra sy trano fisakafoanana mahazatra ny manodidina. trano fandraisam-bahiny, ary koa toerana malaza toy ny Cape Emine na ny vohitr'i Zheravna, Sozopo ary Nesebar.
RIU Hotels & Resorts manana trano fandraisam-bahiny fito any Bulgaria any Obzor, Pravets ary Golden Sands, ary Sunny Beach ihany koa.
Ny eTN dia nitatitra ny momba ny vondrona hotely tato ho ato izay nanjary lasibatra taorian'ny olana ara-piarovana sy fiarovana azo antoka tao amin'ny trano fonenan'izy ireo Montego Bay Jamaica ary ao amin'ny Repoblika Dominikanina.